सेन्सर बोर्डमा हिट “ब्लाईनड रक्स”, अब दर्शक माझ के होला ? | Screennepal
सेन्सर बोर्डमा हिट “ब्लाईनड रक्स”, अब दर्शक माझ के होला ?
२०७४, १५ फाल्गुन मंगलवारscreenadminfeature, Movie, Nepali Movie0
यहि आउँदो शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र “ब्लाईनड रक्स” सेन्सरबाट पास भएको छ । नेपाल सेन्सर बोर्डबाट चलचित्रलाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट प्राप्त भएको छ । यस सर्टिफिकेटको अनुसार सबै व्यक्तिले यस चलचित्रलाई हेर्न पाउने भएका छन् । यस्तै सेन्सर बोर्डले चलचित्र “ब्लाईनड रक्स” लाई यस बर्षकै उत्कृष्ट चलचित्र बताएको छ । नेपाल सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिनु अगाडी चलचित्र हेरेको थियो र त्यहाँ पनि सबैको आँखा रसायो । चलचित्रले सबैको मन छोयो । चलचित्रले यस भन्दा अगाडी पनि विदेशको प्रदर्शनमा धेरै दर्शकहरुको माया र साथ पाईसकेको छ । त्यसै गरि विदेशमा पनि चलचित्रले धेरै दर्शकहरुलाई रुवाउन सफल भएको थियो ।
यी सबै कुरालाई नियाल्ने हो भने चलचित्रले राम्रो सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ । यस्तै चलचित्रको भोलि अर्थात् फाल्गुन १६ गते बिहान कमलपोखरीमा अवस्थित कुमारी सिनेमा घरमा रेड कार्पेट प्रिमिएर हुदैछ । प्रिमिएरको लागि सबै तयारी पनि पुरा भईसकेको चलचित्रका निर्माता निकेश लिम्बुले जानकारी दिएका छन् । प्रिमिएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित चलचित्रकर्मीहरुको साथमा अरु थुप्रै बरिष्ट व्यक्तिहरु र पत्रकारहरुको उपस्थित हुने निर्देशक मिलन चाम्सले बताएका छन् । चलचित्रको सार्वजनिक ट्रेलर, गीत र नेपाल बाहिर देखि आएको प्रतिक्रियाले नै चलचित्र हेर्न सबै व्यक्ति उत्साहित रहेको देखिन्छ ।
चलचित्रले के कस्तो जादु नेपालका दर्शकहरु माझ चलाउने हो त्यो भने शुक्रबार नै थाहा हुनेछ । यता सेन्सरबाट चलचित्रले युनिभर्सल सर्टिफिकेट प्राप्त गरे पश्च्यात सेन्सर बोर्ड समितिले यस्तो चलचित्र निर्माण हुनु पर्ने र अझ यस्तै खालका चलचित्र निर्माण गर्न आफुलाई हौसला प्रदान गरेको निर्देशक मिलन चाम्सले बताएका छन् । यस्तै सेन्सर बोर्डले चलचित्रमा उनको कामको लागि चलचित्रका निर्देशक मिलन चाम्सलाई बधाई समेत दिएको छ ।
चलचित्र “ब्लाईनड रक्स” एक बायोपिक चलचित्र हो । दृष्टिबिहीन युवति सृष्टि केसीको जीवनीमा यस चलचित्र निर्माण भएको छ । उनको जीवन संगर्षको कथा यस चलचित्रमा चित्रण गरिएको छ । नायिका बेनिषा हमालले दृष्टिबिहीन युवति सृष्टि केसीको भूमिका यस चलचित्रमा निर्वाह गरेकी छिन् । चलचित्रमा बेनिशाको अलावा अर्पण थापा, गौरी मल्ल, अनिल केशरी शाह, रितेश चाम्स र बसन्त भट्ट लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । त्यसै गरि चलचित्रमा नवराज कृष्ण थापाको छायांकन र अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको छ । यस्तै चलचित्रको कथा यम थापा र सुमन उप्रेती मिलेर तयार गरेका हुन् । यस्तै चलचित्रको निर्देशन मिलन चाम्सले गरेका हुन् भने निर्माण निकेश लिम्बुले गरेका हुन् । यस्तै गिरीराज घिमिरे चलचित्रको मुख्य सहायक निर्देशक हुन् ।
हेर्नुस गीत :
Previous Postताप्लेजुङमा सौचालय बनाउन हङकङमा रुकमानको दमदार प्रस्तुती Next Postपोखराबाट सुरु भो सुब्रतको ‘सुश्री सम्पत्ति’